Clip mora, Sina, orinasa, mpanamboatra ary mpamatsy - Dongguan FUYA METAL & Products Plastika Co., Ltd.
Clip tsy manara-penitra
Ny vatan'ny vokatra dia vita amin'ny PP, ny antsamotady dia vita amin'ny vy lohataona nandrisika, ary ny lohan-doha dia vita amin'ny TPR malefaka.
Ny ampahany plastika malefaka amin'ny chuck an'ny vokatra dia afaka mampihena ny marika kely ary tsy manimba ny akanjo rehefa mifatotra ny akanjo.
Ny vatan'ny vokatra dia vita amin'ny PP, ny antsamotady dia vita amin'ny vy plastika POM, ary ny toeran'ny clamping an-doha dia vita amin'ny TPR malefaka.
Karazan-tsarin'ny vokatra Racks mihantona Brand FuyaImport na tsia? Fitaovana fanamainana famafana karazana plastika miendrika plastika + lambaCompany mampiavaka ny novokarin'ny tena + amidy-tena Toerana famokarana Dongguan Azo aforitra afaka
Folder loko roa lehibe
Ny paosin-damba roa dia matetika misy sanganasa mifanohitra roa izay mandalo fulcrum ary mampiasa loharano hifanarahana na hanitarana. Misokatra ny tendrony roa ary mihamafy ny tendrony hafa.
Haben'ny clip roa loko
Sokajy vokatra Clothespin nohafarana na tsia Brand FuyaMaterial Plastika madio plastika fitaovana vaovao mitentina 80% â € ”99% ny akora vaovao Origin Dongguan
Ny orinasa Clip dia manana kalitao avo, tsara laza ary serivisy mieritreritra ary nahazo dera iraisan'ny mpanjifa tao an-trano sy tany ivelany. Miaraka amin'ny vidiny mora dia hahazo Clip serivisy sy serivisy tena tsara ianao. Miaraka amin'ny "kalitao tena tsara manome marika miavaka" ho tanjon'ny orinasa, ampiharo fatratra ny fenitra momba ny rafitra fanamarinana kalitao ISO9001, 9002 ~